Ch 24 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 24 Luke
24:1 Avy eo, amin'ny Sabata voalohany, tamin'ny voalohany indrindra hazavana, dia nankany amin'ny fasana, mitondra ny zava-manitra izay efa namboariny.
24:2 Ary nahita ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana indray.
24:3 Ary, tamin'izy niditra, dia tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo.
24:4 Ary nony fa, -tsainy raha mbola sahiran-tsaina momba izany, indro, nisy roa lahy teo anilany koa, amin'ny fitafiana mamirapiratra.
24:5 Avy eo, satria dia raiki-tahotra, ary dia nitodika nanatrika ny tany, ireo zavatra roa ireo hoy izy taminy: "Nahoana ianareo no mitady ny velona amin'ny maty?
24:6 Tsy ato, fa efa nitsangana. Tsarovy izay nolazainy taminareo, fony Izy mbola tany Galilia,
24:7 nanao hoe:: 'Fa ny Zanak'olona tsy maintsy hatolotra eo an-tànan'ny mpanota, ka hohomboana amin'ny hazofijaliana, ary ny hitsangana amin'ny andro fahatelo. ' "
24:8 Dia nahatsiaro ny teniny.
24:9 Ary rehefa niverina avy tao am-pasana, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy, ary ho an'izay rehetra ny olon-kafa.
24:10 Ary i Maria Magdalena, ary Joanna, ary Maria Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay nomba azy, izay nilaza izany tamin'ny Apôstôly.
24:11 Fa izany teny izany toa azy ireo ny zava-poana. Koa araka izany ny tsy nino azy ireo.
24:12 fa Petera, eny, nifoha, nihazakazaka nankany amin'ny fasana. Ary niondrika, ka nijery ny lambam-paty nipetraka napetraka irery, ka dia lasa manontany tena ny tenany mikasika ny zava-nitranga.
24:13 Ary indro, roa lahy tamin'ireny nandeha nivoaka, tamin'izany andro izany, ho any amin'ny tanàna atao hoe Emaosy, dia ny halavirana ny enim-polo stadio raha any Jerosalema.
24:14 Dia niresaka momba ireo zavatra ireo rehetra izay efa nitranga.
24:15 Ary nony fa, raha mbola hanombantombana sady nanontany-pony ireo, i Jesosy mihitsy no, manakaiky, nandeha tamin'izy ireo.
24:16 Nefa ny mason'ireo dia tsy nahasakana, ka tsy nahafantatra azy.
24:17 Ary hoy Izy taminy:, "Inona avy ireo teny ireo, izay no hevitra amin'izy samy izy, rehefa mandeha ary mampalahelo?"
24:18 Ary ny anankiray teo aminy, izay atao hoe Kleopasy, namaly nanao taminy hoe, "Hianao va no irery no nitsidika an'i Jerosalema tsy mahalala ny zava-nitranga tao tamin'izao andro izao?"
24:19 Ary hoy Izy taminy:, "Inona no zavatra?"Ary hoy izy ireo:, "About Jesosy avy any Nazareta, izay tsara indrindra mpaminany, mahery tamin'ny asa sy ny teny, eo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra.
24:20 Ary ahoana ny mpisorona avo sy ny mpitarika azy eo an nanolotra hanamelohany Azy ho faty. Ary nanomboany tamin'ny hazo fijaliana.
24:21 Nefa nantenainay fa Izy no ho ilay Mpanavotra an'i Isiraely. Ary ankehitriny, teo an-tampon'ny rehetra izany, androany no andro fahatelo hatramin'ny efa nitranga ireny zavatra ireny.
24:22 Avy eo, koa, vehivavy sasany avy eto amintsika nampahatahotra anay. Fa raha mbola antoandro, izy tany am-pasana,
24:23 ary, dia tsy nahita ny faty, dia niverina, ka nilaza fa efa nahita fahitana mihitsy aza ny anjely, izay nilaza fa velona.
24:24 Ary ny sasany amintsika, nivoaka nankany amin'ny fasana. Ary nahita araka izay nolazain'ny vehivavy. fa tena, dia tsy nahita azy. "
24:25 Ary hoy Izy taminy:: "Tena adala sy ny misalasala am-po ianao, ny mino izay rehetra efa nolazain 'ny Mpaminany!
24:26 Fa tsy takiana ny Kristy tokony ho niaritra izany, ary dia hiditra any amin'ny voninahiny?"
24:27 Dia nanomboka hatramin'i Mosesy sy ny mpaminany rehetra, izay efa nolazainy ho azy ireo, ao amin'ny Soratra Masina rehetra, ny zavatra izay teo aminy,.
24:28 Ary dia nanatona ny tanàna izay nalehany. Ary nitarika ny tenany mba handeha lavitra kokoa.
24:29 Nisisika anefa izy ireo dia niaraka taminy, nanao hoe:, "Tomoera aminay, fa efa ho hariva izao, ary izao no fihenan'ny mazava. "Ary noho izany dia niditra taminy.
24:30 Ary nony fa, raha mbola nipetraka nihinana teo aminy, dia nandray mofo, Dia nitso-drano ka notapahiny, ary omena azy ireo.
24:31 Ary nahiratra ny masony, ka nahalala Azy;. Dia nanjavona amin'ny masony.
24:32 Ary hoy ireo olona hafa, "Tsy nangorakoraka ny fontsika antsika, raha mbola niteny izy teny an-dalana, ary rehefa nosokafany ny Soratra Masina tamintsika?"
24:33 Dia niainga tamin'izany ora izany, dia niverina ho any Jerosalema. Ary nahita ny iraika ambin'ny folo lahy tafangona, ary ireo izay nomba azy,
24:34 nanao hoe:: "Raha ny marina, ny Tompo efa nitsangana, ary efa niseho tamin'i Simona. "
24:35 Ary nanazava ny zavatra izay natao teny an-dalana, ary ny nahafantarany azy tamin'ny famakiana ny mofo.
24:36 Avy eo, raha mbola niresaka momba ireo zavatra ireo, Jesosy nitsangana teo afovoany, Ary hoy Izy taminy:: "Fiadanana ho anareo. Izaho. Aza matahotra."
24:37 Na izany aza tena, Tena sahiran-tsaina izy ireo, ary raiki-tahotra, satria nataony fa dia nahita fanahy.
24:38 Ary hoy Izy taminy:: "Nahoana no mitoloko, ary nahoana no ireo eritreritra mitsangana ao am-ponareo?
24:39 Jereo ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho. Jereo ka aza mikasika izay. Fa ny matoatoa tsy mba manana nofo sy taolana, tahaka izao ahitanareo Ahy izao. "
24:40 Ary rehefa nilaza izany, dia nasehony azy ny tànany sy ny tongony.
24:41 Avy eo, izy ireo raha mbola eo amin'ny tsy finoana sy ny zava-mahagaga avy tany fifaliana, hoy izy:, "Ve ato aminareo hihinana na inona na inona eto?"
24:42 Ary dia nanatitra azy vakim-trondro natono sy ny toho-tantely.
24:43 Ary rehefa nihinana izy ireo eo imasony, maka izay no sisa, dia natolony azy ireo.
24:44 Ary hoy Izy taminy:: "Izao no teny izay nolazaiko taminareo fony aho mbola teo aminareo, satria ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho tanteraka izay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy, sy ao amin'ny Mpaminany, ary ao amin'ny Salamo momba ahy. "
24:45 Dia nanokatra ny saina, ka Izy hahalala ny Soratra Masina.
24:46 Ary hoy Izy taminy:: "Fa araka izany koa no voasoratra, Ary dia toy izany no ilaina, fa ny Kristy nijaly sy nitsangana avy any amin'ny maty amin'ny andro fahatelo,
24:47 ary, amin'ny anarany, fa ny fibebahana sy ny famelan-keloka mba hotorina, any amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema.
24:48 Ary ianareo no vavolombelon'izany.
24:50 Then he led them out as far as Bethania. And lifting up his hands, nitso-drano azy.
24:51 Ary nony fa, while he was blessing them, he withdrew from them, and he was carried up into heaven.